ထိပ်တန်း6ခရီးသွားရန်ဥရောပ၌အိပ်ပျော်နေသောရထား | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ထိပ်တန်း6ခရီးသွားရန်ဥရောပ၌အိပ်ပျော်နေသောရထား
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 28/08/2020)
သငျသညျအစဉျအမွဲကပြူးကြည့်တူခံစားရသောအရာကိုအံ့ဩကြပါပြီ, ကျယ်ပြန့်မျက်လုံးများနှင့်, အားဖြင့်လောကဓာတ်လေပြင်းအဖြစ်ကြီးမားသောရုပ်ပုံပြတင်းပေါက်ကို? ဘယ်လိုဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုဆင်း trundles အဖြစ်ရထားများ၏တည်ငြိမ်လှုခြင်းဖြင့်အိပ်ပျော်ခြင်းမှ lulled ခံအကြောင်းကို? မီးရထားခရီးသွားလာ ဥရောပတစ်လွှားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အလွန်ဘုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ဖြစ်ကောင်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ဦးအိပ်ပျော်ရထားကနေတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားရထား, သောပုံမှန်အားဖြင့်နှောင်းပိုင်းတွင်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ချွတ်ယူ။ ညဉ့်ကိုဖြတ်သန်းသွားလာရကြ၏, စံကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအတှေ့အကွုံကိုဆက်ကပ် ခရီးစဉ်အတွေ့အကြုံကိုလေ့ကျင့်. ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဥရောပအကောင်းဆုံးအိပ်ပျော်ရထားမှာစုဝေးင့်. အီတလီနိုင်ငံကနေပြင်သစ်ကို, ဒီမှာဥရောပထိပ်တန်းညရထားခြောက်စီးရှိတယ်.
ရထားပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco-Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားနေဖြင့်တွေအကြောင်းပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား တစ်ဦးကရထား Save, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
ထိပ်တန်းအိပ်ပျော်ရထား 1: Milan To Palermo
သငျသညျအစဉျအမွဲအီတလီကျေးလက်ကြုံတွေ့၏အိပ်မက်မက်ဖူးလျှင်, ဒီအိပ်ပျော်ရထားအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်. အဆိုပါပေမယ့် ရထားခရီး အစမှအဆုံးအထိဖောင်းပွပြီးနာရီ ၂၀ ခန့်ကြာသည်, ရထားတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်အိပ်ပျော် Cabin ဘို့ options အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. လက်မှတ်တွေ Thello ကနေတဆင့်လည်းရရှိနိုင်ပါ, အရာအဖြစ်ကောင်းစွာဗင်းနစ်မှလက်မှတ်တွေလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်.
သငျသညျပိုက်ဆံကယ်ဖို့ရှာနေခဲ့လျှင်, လူလေးယောက်ပါတဲ့ကူရှပ်ကိုသင်ရွေးနိုင်သည်, mini ကိုအိပ်ပျော် option ကိုတစ်ဦးစီအဖြစ်ပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို. သို့သျောလညျး, သငျသညျအခြို့သောလေးနက်သောပိတ်-မျက်စိရဖို့ရှာနေမယ်ဆိုရင်, လူသုံးယောက်ပါသည့်အခန်းကိုသူငယ်ချင်းများနှင့် ခွဲ၍ ရွေးချယ်နိုင်သည် – သို့မဟုတ်ပင်သူစိမ်း, နှင့်လက်မှတ်အောက်မှာကုန်ကျမည် 50 ယူရို. တစ်ဘက်မှာ bargain င်! သင်တစ်ဦးထက်ပိုသော Deluxe ခွအေနကေိုရှိသည်ဖို့ရှာနေခဲ့လျှင်, သင်သည်လည်းရှစ်ဆယ်အောက်မှာယူရိုတစ်ခုတည်းအိပ်ပျော်ကြိုတင်ယူထားနိုင်ပါတယ်. သင်သည်မည်သည့် en suite ကိုအဆောက်အဦကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ပေမယ့်, မင်းဟာအတော်လေးစျေးပေါတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်ခြင်းကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်.
ဒီခရီးစဉ်အီတလီ၏ကျယ်ပြန့်အေိမျမြားကိုမြင်, ဒါဟာနိုင်ငံရဲ့ Boot တက်၏အစွန်အဖျားမှမီလန်ကနေလမ်းအပေါင်းတို့ကိုသင်ကြာအဖြစ်. လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် Tuscany တောင်တန်းများကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်သည်. ဤသူကားအ, ဒါပေါ့, ရောမတို့၏စကျင်ကျောက်ရုပ်ထုများနှင့်၎င်း၏သမိုင်းအပြင်.
ထိပ်တန်းအိပ်ပျော်ရထား 2: ဟမ်းဘတ်သို့ဇူးရစ်
ဥရောပအကောင်းဆုံးအိပ်ပျော်ရထားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယရွေးဇူးရစ်ကနေအပြေးတ, ဟမ်းဘတ်မှဆွစ်ဇာလန်, ဂျာမနီ. If you’re looking forasleeper train service, သင် Nightjet စဉ်းစားရန်လိုခငျြပါလိမ့်မယ်. ဒီရထားများအတွက်ရရှိနိုင်မျိုးစုံမရပ်မနားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်နေစဉ်, သင်အပြောင်းအလဲများကိုပေးသည်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်သွားစဉ်းစားရန်လိုပေမည်. ကျေးလက်လှပ, နှင့်ရထားမှတဆင့် meanders မြောက်မြားစွာနည်းနည်းကျေးရွာများ လမ်းတစ်လျှောက်, Hanover ၏မြို့အပါအဝင်. သင်အချိန်ရှိသည်ဆိုပါကဤရွေ့ကားမြို့ရွာသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်ရပ်တန့်ရကျိုးနပ်များမှာ. အဆိုပါမေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် အံ့မခန်းအမြင်များ အဲလ်ပ်တောင်များကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်လိမ့်မည်.
ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ, သငျသညျဟမ်းဘတ်ရန်သင့်လမ်းကိုဖန်ဆင်းပါတယ်တစ်ချိန်ကသင်ဘာလင်ကနေအတိုအကွာအဝေးနေ. လက်ရှိဂျာမန်မြို့တော်သည်တင်ပါးဆုံရိုးနိုက်ကလပ်များနှင့် hipster ယဉ်ကျေးမှုကိုအကြွင်းမဲ့အပ်နှံခြင်းကြောင့်လူသိများသည်. လမ်းအနုပညာကိုခံစားပါ ဘာလင်တံတိုင်း၏နံရံပေါ်ရှိအပြောင်အပျက်များကိုသင်စဉ်းစားနေစဉ်ကော်ဖီနှင့်အလွန်ကောင်းသည်.
ထိပ်တန်းအိပ်ပျော်ရထား 3: Brussels To Vienna
ဗီယင်နာဥရောပအိပ်ပျော်ရထားဖို့ဘရပ်ဆဲလ်သြစတြီးယားမှဘယ်လ်ဂျီယံချိတ်ဆက်နေတဲ့ပေါ်ပြူလာလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်. သင်ရွေးချယ်သောရထားပေါ် မူတည်၍, မွန်းလွဲပိုင်းမှစပြီးပြေးတာနဲ့မနက်စောစောရောက်တယ်, နှင့်တဆယ်နာရီနာရီဖြစ်ပါတယ်’ ခရီးသွားအချိန်. ဤသည်ထက်အစာအိမ်မှအများကြီးလွယ်ကူသည်, ပွောဆို, မီလန်မှ Palermo သို့ညရထားဖြင့်လိုအပ်သောနာရီ ၂၀.
ရထားလမ်းခရီးသွားဘို့အချိန်ထိုကဲ့သို့သောအတိုငွေပမာဏနှင့်အတူ, သင်ထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးမှာ overlong ရစ်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, သငျသညျဆက်ဆက်ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းများကကမ်းလှမ်းသာယာအဆင်ပြေမှုများခံစားနိုင်ပေမယ့်.
သင်ဗီယင်နာသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်လုပ်နိုင်သည် စစ်မှန်သောကော်ဖီယဉ်ကျေးမှုကိုခံစားပါ, ဗီယင်နာသည်ဥရောပကော်ဖီ၏ဗဟိုအဖြစ်သူ့ဟာသူထူထောင်ခဲ့သည်.
ထိပ်တန်းအိပ်ပျော်ရထား 4: Edinburgh ရန်လန်ဒန်
ဤသည်ကျော်ကြားသော routing ကိုတစ်ပတ်ကိုခြောက်ကြိမ်ပြေး. ထို့အပြင်ကယ်လီဒိုးနီးယားအိပ်ပျော်ကိုခေါ်, ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုနှင့်အတူဤအိပ်ပျော်ဝန်ဆောင်မှုရောသမမွှေများဇိမ်ခံ. သငျသညျအစာကိုပါဝင်သည်ကြောင့်အပေးအယူရှာတှေ့နိုငျ, အချိုရည်, နှင့်သင်တန်း, အိပ်ပျော်နေတဲ့ cabins.
သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်အတွင်းဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့သို့သွားရောက်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, သင်အမြဲပြည်မဥရောပကနေ Eurostar ယူရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်. ဤသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှအင်္ဂလန်မှ channel ကိုဖြတ်ပြီးခရီးစေရန်တစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနဲ့ရိုးရိုးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. လက်မှတ်တွေအခြားနေရာများကနေရရှိနိုင်ပါ, ထိုကဲ့သို့သောအမ်စတာဒမ်အဖြစ်.
သင်ဤလမ်းကြောင်းကိုရွေးဖို့အကြောင်းပြချက်ရှာနေခဲ့လျှင်, Edinburgh သည်ကြောင်းကိုသတိရပါ ဟယ်ရီပေါ်တာ၏အိမ်, JK Rowling ၏ကျော်ကြားတဲ့ဖန်တီးမှု. သင်တို့သည်လည်းကုန်းမြင့်သို့နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောဝိန်း Fort ဝီလျံအဖြစ်, ကြောင်းစစ်မှန်စကော့တလန်အတွေ့အကြုံ. အဲဒါငါတို့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်!
ဂုဏ်အသရေဖော်ပြခြင်း 5: မြူးနစ်ရန်ပဲရစ်
ဒီခရီးစဉ်ဟာနည်းပညာပိုင်းအရအိပ်ပျော်တဲ့ရထားလမ်းကြောင်းအဖြစ်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါဘူး, ဒါကြောင့်အပြည့်အဝအိပ်အိပ်စင်မပါဝင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, နေ့စဉ်လမ်းကြောင်းများစွာပြေးဆွဲသည်.
ဒါပေါ့, ပဲရစ်အလင်းအိမ်နှင့်ကမ္ဘာထဲမှာအများဆုံးရင်ခုန်စရာမြို့တမြို့ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်လုံးဝသင့်ရဲ့ဥရောပအားလပ်ရက်အပေါ်တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးဂိုးသွင်းသင့်တယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ပထမဆုံးခရီးစဉ်သို့မဟုတ်သင့်ရာစေ့ရဲ့ရှိမရှိမှန်.
ဤအတောအတွင်း, မြူးနစ် Oktoberfest မှနေရာဖြစ်သည်. ဤသည်ပွဲတော်အားလုံးအချိန်ငါ့အကြိုက်ဆုံးတွေထဲကဖြစ်ဖြစ်ပျက် – ဒါဟာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကြူးဖြစ်ရပ်င်. ရွေးချယ်ဖို့ရာမှတစ်နှစ်လျှင်တက်ရောက်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများတစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏နဲ့အတူ, မြူးနစ်သည်သင်၏စာရင်းတွင်အစက်အပြောက်တစ်ခုဖြစ်သည်.
ဂုဏ်အသရေဖော်ပြခြင်း 6: Copenhagen To Berlin
ဒါကစံမမှန်အိပ်ပျော်ရထားအတွေ့အကြုံကိုကြောင့်အခြားမှုးမတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်သည်ဥရောပရှိအလှဆုံးမြေပြင်အနေအထားအချို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ကျော်သွားသောကြောင့်အချိန်ကုန်ရကျိုးနပ်ပါသည်. ဒိန်းမတ်စကင်ဒီနေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ပြည်မကြီးမှဥရောပယဉ်ကျေးမှု၏တစ်မူထူးခြားတဲ့ရောနှောသည်နှင့်လွဲချော်ခံရဖို့မဟုတ်ပါ. လမ်းကြောင်းလည်းအရမ်းနီးနေပြီ မာလ်မို, အရာသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့နှင့်ဆွီဒင်တွင်တတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည်.
သင်သည်ဤရထားပေါ်တွင်အပြည့်အဝအိပ်ဆိုက်ကပ်ကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ပေမယ့်, သငျသညျနေ့အချိန်ညဥ့်ရရှိနိုင်ပါရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဤရွေ့ကားသငျသညျညအချိန်တွင်ထွက်ခွာရန်နှင့်နံနက်ယံ၌ရောက်ရှိမည်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်နေ့ကိုလာရန်အဘို့အသက်သာစေ. non-အိပ်ပျော်ရထားနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံအတွက်, သင်ပထမတန်းစားလက်မှတ်တွေကြိုတင်စာရင်းသွင်းချင်တယ်. ဤရွေ့ကားလက်မှတ်တွေကိုမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောအပိုအိတ်ကိုအဖြစ်တိုးမြှင့်အခွင့်အရေးနှင့်အတူ လာ., ပါဝင်သည်အစားအစာ, နှင့်ပိုပြီးပုဂ္ဂလိကအခန်းအတွေ့အကြုံကို.
တစ်လျှောက်လုံးခရီးသွားလာတဲ့အခါ ရထားနဲ့ဥရောပ သင်ရွေးချယ်မှုအတွက်လုံးဝပျက်စီးနေသည်. ဒါကြောင့်စကော့တလန်သို့မဟုတ်စပိန်ရဲ့ရှိမရှိ, နော်ဝေ, သို့မဟုတ်ဆွီဒင်နိုင်ငံ, အိပ်ပျော်ရထားသက်သာလာရန်သင့်နေ့အဘို့အဆင်သင့်နောက်တစ်နေ့နံနက်ရောက်ရှိလာဘို့န်းကျင်ကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုတချို့ရှိနေပါတယ်. သင်ရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ရှိနေစဉ်, ထိုကဲ့သို့သောရထားဟိုတယ်သို့မဟုတ်နေ့ချင်းညချင်းအိပ်ပျော်နေသောပရာ့ဂ်လေ့, ပိုလန်, လစ္စဘွန်းသို့မဟုတ်ပင်မော်စကို, ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာမယ့်အစားဥရောပတွင်ဤခြောက်လထိပ်တန်းအိပ်ပျော်ရထားဝင်တိုက်. သင်တို့ကိုဝမ်းနည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ!
ညဉ့်အခါခရီးသွားလာနှင့် သင်၏အိပ်ပျော်နေသောရထားများကိုစာရင်းသွင်းပါ တစ်ဦးကရထား Save!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ထိပ်တန်း6ခရီးသွားရန်ဥရောပ၌အိပ်ပျော်နေသောရထား” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsleeper-trains-europe%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အောက်ပါလင့်ခ်များတွင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ဒီ link ကိုစာမျက်နှာများတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်အင်္ဂလိပ်လမ်းကြောင်းများအဘို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, ထို့အပြင်သင် es ကို fr သို့သို့မဟုတ် de သို့သင်ရွေးချယ်သောအခြားဘာသာစကားများနှင့်အစားထိုးနိုင်သည်.
#nighttrain ဥရောပခရီးသွား NightTrains SleeperTrains ရထားခရီးသွား